HomeWararka CaalamkaRuushka oo war kasoo saaray in dib loo bilaabo Wada-hadalada Dalka Ukraine
May 20, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Photo/Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS
Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Andrei Rudenko ayaa sheegay in Moscow ay diyaar u tahay in ay dib u bilowdo wadahadaladii nabadeed ee ay kula jirtay Ukraine “marka ay muujiyaan rabitaankooda”.
Waxaa soo xigtay wakaaladda wararka dawladda ee Tass, sida ay sheegtay New York Times .
Wadahadallada ayaa burburay bishii Abriil. Waqtigaas, wada xaajoodka Ukraine Mikhail Podolyak ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in horumar laga sameeyo wada xaajoodyada ilaa iyo inta uusan Ruushku aqoonsanayn xaaladda jirta.
“Ilaa maanta, waxay ku nool yihiin duni ay ka jirto naasinimo lagu eedeeyay Ukraine,” Podoljak ayaa u sheegay telefishinka Ukraine.
Kaliya marka ciidamada Ruushka ay ka baxaan ayaa suurtagal noqon doonta in laga wada xaajoodo xabbad joojin, ayuu yidhi.